कसरी आयो हरितालिका तीज, के हो शास्त्रीय मान्यता ?
काठमाडौं । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरि तालिका (तिज) पर्व देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ । यो दिन गणेशचतुर्थीव्रत पनि परेको छ । भाद्र शुक्लपक्षको तृतीया तिथिमा हरितालिका तीज पर्ने गर्दछ । भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा, उपासना गरेमा सुख, शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ ।
सखिको अन्यत्रै विवाह हुनलागेको समयमा साथीले भगाएर लगी शिवजीवर प्राप्त गर्ने मनोकामना पूरा गराएको पौराणिक कथा यसको मूल धार्मिक पाटो हो । हरितालिका तीजको व्रत वस्नाले मनले चाहेको वर प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ । वालुवाको शिवलिङ्ग बनाई गौरी सहित शिवजीको उपासनाका साथै भजन, कीर्तन एवं नाचगान गरी यो पर्व मनाउने गरिन्छ ।
पार्वती समस्यामा परेको थाहा पाएपछि उनका साथीहरुले हरण गरेर लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राखिदिए । साथीहरुले लुकाएकै ठाउँमा पार्वतीले निराहार व्रत गरी महादेवलाई प्राप्त गरिन् । यसरी पार्वती साथीद्वारा हरण भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतीयाको दिन भएकाले त्यही समयदेखि हरितालिका ९तिज० को व्रत लिने प्रचलन शुरु भएको धर्मशास्त्रीय मत छ ।
स्वास्थ्य ठीक नहुनेले गहुँको रोटी, मकैको रोटी, स्याउ, सुन्तला, केराजस्ता फलाहार गरेर पनि व्रत बस्न सकिने पनि उनले जानकारी दिए । श्रीमान्को दीर्घायुको कामनाका लागि मात्र तिजको व्रत बसिने भनेर गलत प्रचार भइरहेको वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका प्रमुख डा. देवमणि भट्टराईले बताए ।
“अटल सौभाग्यको कामनाका लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि, अविवाहित केटी एवं केटाहरुले असल वर र बधु प्राप्तिका लागि पनि तिजको व्रत बस्ने शास्त्रीय विधान छ”, उनले भने । नारीले परिवारको अभिभावकका रुपमा प्रतिनिधित्व गरी व्रत बस्ने भएकाले नसकेका अवस्थामा अथवा रजस्वला भएका बेलामा पुरुषले पनि व्रत बस्ने गरेका छन् । यस अर्थमा अहिले केही नारीवादीले उठाएजस्तो विभेद्कारी व्रत परम्परा पनि तिज नभएको धर्मशास्त्रविदको भनाइ छ ।
व्रत सकाम, निष्काम, नित्य, नैमित्तिक, र काम्य गरी पाँच किसिमका छन् । तिजको व्रत नित्य र काम्य दुवै खालको भएको धर्मशास्त्रीय मान्यता छ । तिजको व्रत हिन्दू मात्रका लागि नभई मानव मात्रका लागि भएको कुरा धर्मशास्त्रीय ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएको पनि उनीहरुले सुनाए ।
यस वर्ष गणेशको उत्पत्ति भएको विश्वास गरिने गणेश चौथी र ऋषि पञ्चमी पर्व भदौ १७ गते मङ्गलबार एकैदिन परेको समितिले जनाएको छ । बिहान सवा सात अघि गणेश पूजा, अघ्र्यदान गरी फलफूल, दूधलगायत शुद्ध भोजन गरेर पञ्चमी स्नान गर्नुपर्ने अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिनुभयो । चौथी प्रातः कालमा तिथि परेका बेला र पञ्चमी मध्याह्न कालमा पञ्चमी परेका बेला मनाउनुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै, शास्त्रीय रुपमा महिला, पुरुष दुवैले हरि तालिका (तिज)को व्रत गर्नुपर्ने भए पनि सामाजिक चर्चा भने महिलाले श्रीमानको दीर्घायुको कामनाका लागि गर्ने बुझाइ छ । व्रत गर्ने पुरुषले विधुर हुनु नपर्ने, नारीले अटल सौभाग्य र अविवाहित केटा केटीले गुण सम्पन्न वर वा वधु पाउने शास्त्रीय बचन रहेको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतम बताए ।
<<< : मिटरव्याजी कलवार पक्राउ, दुई झोला तमसुक भेटिए
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट तीजको शुभकामना : >>>